ဖြည့်စွက်လက်အိတ် Mitts ထုတ်လုပ်သူများနှင့်ပေးသွင်း | China Grooming Gloves Mitts စက်ရုံ
ဤလက်ချောင်းငါးချောင်း၏ပျော့ပျောင်းသောအကြံဥာဏ်များသည်လက်အိတ်တပ်ဆင်ထားသောလက်အိတ်သတို့သားများကိုအလွယ်တကူအိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များဖြင့်ပြုလုပ်ထားပြီးညာဘက်အရှည် nubs သည်ဆံပင်ကိုဆွဲထုတ်။ ထုတ်ပစ်ရန်လွယ်ကူစေသည်။
3. ထို့အပြင်သင့်၌လက်ကောက်ဝတ်သေးငယ်သည်ဖြစ်စေ၊ ကြီးကြီးမားမားဖြစ်စေရှိပါသလား။ အရည်အသွေးမြင့်သိုင်းကြိုးက၎င်းကိုလက်ကောက်ဝတ်အရွယ်အားလုံးအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်စေသည်။
4.It သည်ရှည်သောဆံပင်သို့မဟုတ်အတိုနှင့်ကောက်ကောက်ဆံပင်များရှိခွေးများနှင့်ကြောင်များအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်အရွယ်အစားနှင့်မျိုးဆက်အားလုံးအတွက်အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်ဆံပင်ဖယ်ရှားသည့်စနစ်ဖြစ်သည်။
1.Rubber အကြံပေးချက်များသည်နူးညံ့သိမ်မွေ့သောအနားယူနိုင်သောအနှိပ်ဖြစ်သည်။ ဤအိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်ဆံပင်ဖယ်ရှားခြင်းလက်အိတ်သည်အထိခိုက်မခံနိုင်သောနှင့်အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။
3.Glove's velor side သည်ပရိဘောဂများ၊ အဝတ်အထည်များနှင့်ကားများတွင်ကျန်ရှိနေသောဆံပင်ပမာဏကိုထိရောက်စွာလျှော့ချပေးသည်။
ကြောင်၊ ခွေး၊ မြင်းသို့မဟုတ်အခြားတိရိစ္ဆာန်များပေါ်တွင်အညစ်အကြေးများဖယ်ရှားပေးသည်။
အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်များသည်အင်္ကျီများကိုအစွန်အဖျားအခြေအနေတွင်ပုံမှန်ထားရန်လိုအပ်သည်။ ဖြည့်ဆည်းခြင်းဖြင့်လုံ့လဝီရိယရှိခြင်းသည်ဆံပင်အသေကောင်များကိုဖယ်ရှားပေးသည်။ လက်အိတ်ဖြီးနေသောအိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်အနှိပ်သည်ကုတ်အင်္ကျီကိုအရောင်တင်ပေးသည်။ အင်္ကျီကိုအလှဆင်ပေးသည်၊ ရှုပ်ထွေးသောအရာများကိုဖယ်ရှားပေးပြီးဆံပင် follicles များကိုလှုံ့ဆော်ပေးသည်။
3. ပတ် ၀ န်းကျင်ခေါင်းတံ၏ဒီဇိုင်းသည်အကျိုးသင့်အကြောင်းသင့်ရှိပြီး၎င်းသည်အနှိပ်ခံခြင်းဖြင့်အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များအတွက်ရေချိုးနိုင်သည်။
အဆိုပါ Eco အထည်သုတ်ခြေနှင့်မျက်နှာပတ်ပတ်လည်ရှုပ်ထွေးသန့်ရှင်းရေး။
ညှိနိုင်သောသိုင်းကြိုးသည်လက်ပုံစံနှင့်အရွယ်အစားအားလုံးနှင့်ကိုက်ညီသည်။ ခွေးရေချိုးသည့်အခါလက်အိတ်ကိုစိုစွတ်သို့မဟုတ်ခြောက်သွေ့။ ဆံပင်ကအခွံခွာသွားနိုင်သည်။